China 30g 50g 100g 250g 500g isina chinhu 8oz caviar tin magaba ane rubber band fekitori uye vagadziri | Byland
30g 50g 100g 250g 500g isina chinhu 8oz caviar tin magaba ane rubber band
Tsananguro: Yakareruka yakavhurika caviar tini inogona, Vharai caviar tin bhokisi, Isina chinhu caviar matini
Saizi: Dhayamita uye kukwirira zvinogona kuchinjwa sekukumbira kwako.
Usage: kurongedza caviar nezvimwe.
Zvinhu: 0.23mm gobvu gaba, rakasiyana hukobvu rinowanikwa.
Yakareruka yakavhurika caviar tini inogona, Vharai caviar tin bhokisi, Isina chinhu caviar tini
Dhayamita uye kukwirira zvinogona kuchinjwa sekukumbira kwako.
kurongedza caviar nezvimwe.
0.23mm gobvu gaba, rakasiyana hukobvu rinowanikwa.
Kupfuura zviuru zveforoma.
1 chidimbu / bhegi rePP, zvimwe zvidimbu / Rokunze katoni.(Sirufu rezai, remukati rakanaka kana uchida)
Mazuva makumi matatu.
1. Dhizaini yeMutengi uye chinodiwa chinonzwisiswa.
2. Chimiro uye saizi yetini yekusimbisa.
3. Dhizaini yekupedzisa.
4.Kudhindwa kwemifananidzo kwemuenzaniso.
5. Yakadhindwa sampuro yekusimbisa.
6. Kugadzirwa kwekugadzira.
Isu tinogadzira kugadzira zvipo tini mabhokisi, tii mabhokisi emabhokisi, mabhuku emataini emarata, ekuchengetedza zvigadzirwa chemabhokisi etini, mishonga tini mabhokisi, mwedzi keke matini mabhokisi, uye mamwe marata akateedzana esimbi yekuisa.
1. Mubvunzo: Ndinoda acaviar tin inogona kungoreba / kukura kudarika saizi yako. Izvi zviri nyore kuita here?
A: Zvichienderana nekuvakwa kwetini isu tinokwanisa kugadzirisa kukwirira kwemataini akapoteredzwa kana epamusoro akaumbika zviri nyore nechishandiso chiripo chekushandisa chetsika odha. Seamless kana kudhonzwa tini zvinoda nyowani nyowani yekushandisa kune chero saizi yekugadzirisa. Isu tiri kugara tichivandudza nekudyara muhunyanzvi hwazvino hunowedzera kupa sarudzo kune vatengi vedu.
2. Mubvunzo: Ndeipi yako yakajairwa lead-nguva yetsika caviar tini?
A: 3-5weeks ine iripo turusi uye yako mifananidzo. Nemaitiro ese ari pasi peimwe denga kubva padanho kusvika pakupera, tinogona kupa kutonga pamwe nekuchinjika uye kuendesa nenguva kune vatengi vedu.
3. Mubvunzo: Ndinofanira kuraira kutanga zvakadii kuti ndive nechokwadi chekuti ndichawana Tsika yangucaviar Matinji munguva yezororo?
A: Tinokukurudzira kuti uronge kumberi zvakanyanya sezvinobvira. Kutaurirana kwakakosha! Kana paine nguva dzakatarwa dzinoda kusangana neyakajairwa odha, rega mutengesi wedu azive nguva yakatarwa. Tinogona kushanda kudzoka kubva pazuva rekutakura uye nekupa nguva yekuwana yekutenga odha, hunyanzvi uye humbowo kubvumidzwa. Sezvo nezvose zvirongwa zvetsika, shanduko dzinogona kunonoka kuendesa kwekupedzisira kweodha yako. Nezvezvino kutungamira nguva titumire email kana kufona pa0755-84550616 uye utaure neMumiriri Wekutengesa.
4. Mubvunzo: Iwo macavi tini akachengeteka kune zvigadzirwa zvekudya? Tinogona here kuwana tsamba inotaura iyocaviar matinji chikafu chakachengeteka here?
A: Caviar matini ipakeji inogamuchirwa yezvigadzirwa zvekudya. Tinogona kukurudzira kupfeka kwemukati kune izvo zvigadzirwa zvine acidic kana mvura yakavakirwa. Isu tinoshandisa inki dzakabvumirwa neDAA uye kupfeka uye tinogona kupa zvinyorwa kubva kune vatinopa. Isu tinoongororwa gore rega nevazhinji vatengi veFortune 500 uye tinosimbiswa kusangana nemipimo yepamusoro yevekudya-vanobata mapakeji vagadziri. Zvese zvivakwa zvedu iSQF2 Certified ne Safe Quality Chikafu Institute.
Yemahara sampuro, yekutakura mutengo inounganidzwa.
Isu tinovimbisa kuchengetedza logo yako nemifananidzo zvakavanzika.
Kana iwe ukaisa odha, ndapota tarisa kune pazasi runyorwa rweMOQ uye akasiyana masayizi.
Pashure: 15g-30g-50g-125g-250g vharuvhu caviar gaba bhokisi nerabha yakavharwa zvivharo
Zvadaro: 250g uye 500g yakavhurika yakavhurika Caviar Tin Can_Ring yekudhonza magaba
15g-30g-50g-125g-250g Vacuum caviar gaba bhokisi zvaiti ...